Kugoverwa kwe iPhone X kuApple Zvitoro Kunotanga Ipo Kugadzirwa Kunoenderera Kukwira | IPhone nhau
Zvakawanda zvataurwa pamusoro pezvinetso zvekugadzira izvo Apple zviri nazvo nezvakasiyana zvikamu zveiyo nyowani Face ID kumeso kuzivikanwa system. Kwete vezvenhau chete vakatsigira runyerekupe urwu, asi huwandu hwakawanda hwevaongorori vanoti Apple ichave nezvakaoma pakati pezvino nekupera kwegore kuti vakwanise kuvhara zvese zvinodiwa neiyo iPhone X inotarisirwa kuve nayo, kuda izvo zvinogona kugutsa mukota yekutanga yegore rinouya. Zvinonzi kubva kuketani yekugadzira, Foxconn Electronics achangotumira odha yekutanga yezvikamu mazana mana nemazana mashanu mazana mashanu zveiyo iPhone X kuzvitoro muNetherlands neUnited Arab Emirates.
Sezvo isu tese tichiziva, kunyanya avo imi makaronga kutenga iyo nyowani iPhone X, nguva yekuchengetera ichatanga muna Gumiguru 27, naNovember 3 riri zuva rakarongerwa kwekutanga kuendesa. Zvinoenderana nezviverengero izvi, zvaizosimbiswa kuti matambudziko ekugadzira chinhu chaicho, asi zvakare zvinoita sekunge Apple yawana mhinduro kuchinetso sezvo kugadzirwa kweiyo iPhone kwaenda kubva pa100.000 kuenda ku400.000 mauniti evhiki mumavhiki apfuura, kunyangwe parizvino idzi nhamba dzisingabvumidze kuvhara kudiwa kwekuti iyi modhi pakutanga ndichave nepasi rose.
Sekureva kwemuongorori Ming-Chi Kuo, Apple yaigona chete kuisa kutenderera pakati pemakumi matatu nemakumi matatu emamiriyoni ematanho gore rino, saka pachiyero ichi zvinoita kunge zvisingaite kuti Apple inogona kusangana nemifananidzo yemuongorori uyu, saka mumwe wevaviri, kana Ming-Chi Kuo anovandudza data rayo kana Apple inoronga kuwedzera kuwedzera kugadzirwa kweiyo iPhone X mumavhiki anotevera, asi zvinotora zvakawanda kuti uswedere padyo nenhamba dzemuongorori. Kunyangwe Ming-Chi Kuo aine yakakwira hit rate, iye zvakare anorova shrimp pane kanopfuura kamwe chiitiko. Kuti kana, kunyangwe asingazvizive, anovandudza manhamba emishumo yake, kuna Cesar zviri zvaCesar.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone X » Kugoverwa kwe iPhone X kuApple Stores kunotanga sezvo kugadzirwa kuri kuramba kuchiwedzera
Iyo Ming-Chi Kuo inopfura ne1000 mabara uye pakupedzisira, vamwe vacharova tarisiro ...
Saka ndinogara ndakarurama zvekare.
Devolo Gigagate, yeWiFi bhiriji inosvika ku2 Gbit / s yezvose zvishandiso zvekumba [Ongorora]